Raha alaina sary antsaina ny fiainantsika zanak’olombelona dia toy ny làlana iray, ary ao anatin’izany làlana izany dia misy ireo sampanana maro izay hodiavina; ka eo no ilàna ny safidintsika. Fa misy làlana tokana ihany izay mitondra antsika any amin’ny fiainana tsara indrindra, sy feno fifaliana, feno fiadanana; fa misy koa ireo làlana maro izay mitondra any amin’ny fahaverezana.
Raha alaina sary an-tsaina, ny làlana izay izorantsika ety ambonin’ny tany izay misy sapanana maro, ary eny amin’ireny làlana ireny dia misy mari-pamantarana ny làlana izay alehanao na ny voalaza amin’ny teny vahiny hoe “Panneaux” io no mitondra anao amin’ny làlana izay tianao haleha. Ny eny amin’ny làlana izay mitondra mankany amin’ny làlan’ny fahamarinana dia ilay mitondra antsika any amin’ny fiainana tsaratsara kokoa, eny amin’ny làlana rehetra eny dia “Jesosy” no torolàlana, “Jesosy Kristy, no làlana”, “Jesosy Kristy no faharinana”, “Jeosy Kristy no fiainana”... Nefa misy ihany koa ireo làlana izay mitondra mankany amin’ny fahaverezana dia ny devoly sy satana no manerana ny làlana, izay misakana sy manembatsembana antsika amin’ny fanarahana an’i Jesosy Kristy. Izay misarika antsika mandrakariva hoany amin’ny làlan-dratsy ka mamitaka, mandrabiraby, manakivy, izany no asany, ka mandainga sy mamitaka foana; mba hahavery ny olombelona.
Aoka aloha hisaina kely isika, mijanona mihitsy aloha maka saina tsara, manolloana ny làlana hodiavina, aiza ilay tena mitondra any amin’ny tena fiainana? Ary izay no nanoratra izany? Diniho tsara aloha ny làlana halehanao. “Làlana manao ahoana no izorako ankehitriny?”. Apetraho eo amin’ny tenanao izany fanotaniana izany. Araka ny efa voalaza tetsy aloha, dia misy làlana roa no hita manoloana anao, dia iza amin’ireo àry no arahanao, ilay mankany amin’ny tena fiainana ve sa ilay mitondra mankany amin’ny fahaverezana?.
Ny horesahina voalohany aloha dia ilay làlana mankany amin’ny haizina na ny fahaverezana.
Ny làlana mankany amin’ny fahaverezana dia migodana sy malaka, ary maizinkitroka. Satria ny olona izay mandeha an’iznay dia mandeha amin’ny haizina. Ny olona mandeha amin’nizany dia tsy mahita afa tsy ny haizinkitroka, izay tsy ahitana afa-tsy ny fahotana, ny fahoriana, ny fijaliana, fahotana maro, herisetra.
Ao anatin’izany làlana dia izany dia ireto avy no hita amin’izany sy ny alehan’ireo izay manaraka azy: famonoana olona, fifohana zava-mahadomelina, herisetra, fanimbana tena sy ny hafa ihany koa, fihoaram-pefy, tsy mahonon-tena, halatra, ets... Ary Ireo rehetra izay manaraka izany làlana izany dia atao hoe mpanota, izay efa fantatr’izy ireo na minia manao izany fa mankany amin’ny fahaverezana izany. Izay tsy mitondra mankany amin’ilay tena fiainana dia ny miaraka amin’i Jesosy Kristy Tompo. Araka ny voalaza ao amin’ny Salamo 1:6; sy araka ny hiota ao amin’ny Matio 7:13
Ary ilay làlana faharoa dia mankany amin’ny fahazavana.
Ny làlana mazava izay mitondra antsika any amin’ilay fiainana feno fahasambarana sy fiadanana dia tena tsara sady mahafinaritra. Ny olona mandeha amin’izany dia ireo olona manana fitiava-namana, tsy manisy ratsy ny hafa, olona manao ny marina. Izany no olona manaraka ny làlana mazava dia Jesosy no làlana Izy no mitondra ahy, mitondra anao hoany amin’ny fiainana izay feno fahatsarana, hoy ny soratra masina izay hita ao amin’ny Hebreo 10:20 Ary betsaka ireo sampanana izay hodiavina, ka tokony hijery tsara isika manoloana ireny, fa ny an’i Jesosy dia ny tsara hatrany no omeny antsika. Dia Jesosy Kristy ilay mitondra antsika any amin’ny tena fiainana, ary mitondra ohatra amin’izany aho toy ny nataon’i Jesosy: nihantra ny mahantra, ireo olona ory.
Koa aoka àry isika hahay hisafidy ny làlana izay tokony haleha, fa izay manaraka ny làlan’i Jeosy Kristy dia hahita fiainana araka ny hita ao amin’ny Ohabolana 12:28 ; Ohabolana 13:23; Ohabolana 21:21; Ohabolana 22:4 , koa raha te hanana izany àry isika dia aoka hibanjina mandrakariva an’i Jesosy Kristy ilay làlana, sy marika mitondra antsika any amin’ny tena fiainana. Koa aoka isika samy sahy hanotany azy hoe,: “Aiza ary no tena làlana? Inona no tokony hataoko amin’izany?” toa izay hita ao amin’ny Matio 19:16 Ary Jesosy no ataovy filamatra eo amin’ny fiainanao ka manaraha àzy mandrakariva. Ka teo ihany Jesosy dia namaly azy ka nanao hoe “Fa hoy Jesosy taminy: Nahoana Aho no anotanianao ny amin’izay tsara? Iray no tsara; fa raha te hiditra any amin’ny fiainana hianao, tandremo ny didy.”. ny didy izay voalazan’i Jesosy eto dia ny didy folo, izay nomena tamin’ny andron’i Mosesy teny an-tendrombohitra, izay nosoratana tamin’ny vato. Fa isika Kristianina izay mpanara-dia an’i Kristy dia manaraka izany; ary tokony ho filamatra eo amin’ny fiainantsika, satria ilay tena fiainana no efa nanamafy izany indray.
Koa ny voninahitra dia ho Azy irery ihany.
Ry Tomponay tsara indrindra ô! Masina sady be voninahitra ianao, misaotra anao raha mbola afaka nianatra ny teninao, ary ny nanoroanao ny tena làlana eo amin’ny fiainana izay alehanay eto amin’ity fiainana mandalo ity. Nanambara ianao fa Jesosy irery ihany no tena làlana ahatongavana any aminao, araka ny voalany hoe: “Izaho no làlana sy fahamarinana ary fianana, tsy misy mankany amin’ny Ray raha tsy amin’ny alalako”. Ka izany Tompo no angatahinay famelana feno eto anatrehanao, satria misy ireo fahotana vitanay izay tsy nifanaraka tamin’ny sitra-ponao. Koa diovy ary sasao amin’ny rànao Jesosy izay nalatsakao teo ambony Hazo Fijaliana. Ary ankehitriny dia manavao indray ny fanoloran-tenanay aminao, hanaraka ny didinao sy ny fitsipikao. Hanavao ny fo, saina, fanahy; izany Jesosy no entinay eto anatrehanao amin’izao fotoana izao. Koa tantano Jesosy izahay fa tsy mahatananao, mangataka ny fahendrena avy aminao koa; mba hahaizanay mitondra ny fiainanay eo aminao, ka hanana fo tahaka ny anao; sy fihevitra tahaka anao. Ary hahaizanay ihany koa mitarika ireo namanay izay mandeha amin’ny làlan-diso rehetra ho aminao. Satria Jesosy mandalo ihany izao fiainana izao, tsy misy mahalala na dia ampitsonay izahay, any fa na dia iray sengondra amin’ny fiainanay aza dia tsy hainay manampy akory.
Koa amin’ny anaranao sy ny rànao Jesosy no anaovana izany vavaka izany.
Ny voninahitra sy ny dera ary ny haja dia atolotray anao; izay efa anao efa hatramin’ny taloha ka ho mandrakizay.